सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बृद्ध भन्छन् : बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाउँनुहोस् ! — KhabarTweet
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बृद्ध भन्छन् : बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाउँनुहोस् !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ समय: ८:२४:१९
दिङ्ला,११ मंसिर- केहिदिन देखि एकजना बृद्धको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भईरहेको छ । एउटा थोत्रो व्ल्याकेट ओडेर परालमाथि स्लाईन चढाईरहेको अत्यन्तै नाजुक अवस्थाका बृद्धको सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजानिक भएपछि विश्वभर रहेका नेपालीमाझ उनको चर्चा परिचर्चा भएको हो । उनको दयनिय अवस्था देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा स्थानिय देखि केन्द्र सरकारसम्मको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
बाँच्न चाहन्छु मलाई बचाउँनुहोस् !
कसले गर्दै छ त सहयोग ?
सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएतापनि बृद्ध राईलाई उल्लेख्य सहयोग भने आउन नसकेको अवस्था रहेको छिमेकीहरु वताउँछन् । उनका मुख्य सहयोगि भनेको छिमेकीहरुनै हुन । उनलाई चिया, खाना, तातो पानी छिमेकी मंगल बहादुर तामाङ र हर्क कुमारी राईले दिईरहेकाछन् । बुधवार विहान शिवम् सप्लायर्स तथा आईएमई सेन्टर दिंलाका सञ्चालक सरिता श्रेष्ठले जन्मदिनको अवसरमा सिरक, डसना, तन्ना र सिरानी प्रदान गरेकी छिन् । राईलाई किरात राई यायोख्खा दिंला शाखा, न्यु समिट बोर्डिङ, व्यापारी रमेश कटवाल,कुमार गुरुङ, बुढाशुव्वा हार्डवेयर, यल्लो रिभर ग्रुपले लत्ताकपडा, चामल, दाल, विस्कुट लगायतका सामाग्री प्रदान गरेकाछन् ।